Hawaii dia mizotra amin'ny toe-javatra mahatsiravina amin'ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Podcasts » Hawaii dia mizotra amin'ny toe-javatra mahatsiravina amin'ny COVID-19
Tranga tranga mampatahotra manodidina ny 200 ankehitriny no tena zava-misy ao amin'ny State of Hawaii. Miorina amin'ny isan-jato Hawaii nifindra avy amin'ny isa ambany indrindra amin'ny tranga nitombo ho iray amin'ny avo indrindra any Etazonia. Nilaza i Dr. Anderson fa afaka manantena tranga 500 sy maro isan'andro ny fanjakana tsy ho ela. Toe-javatra mahatsiravina izany. Mety hitera-doza izany- ary toa ny làlan'i Hawaii ihany.
Ity ny hafatra nampitain'ny Dr. Anderson androany tao amin'ny Governemanta Press Conference
Ny 10% amin'ireo tranga dia mitaky hopitaly, ary i Hawaii dia miatrika krizy ara-pahasalamana, indrindra any Oahu. Ny fampiharana sy ny fitomboan'ny vondrom-piarahamonina aorian'ny fanokafana an'i Hawaii dia io no vokany.
Tranga 115 nampidirina hopitaly tamin'ny 117 no tany Oahu.
Ny virus dia voafafy ao amin'ireo vondrom-piarahamonina feno olona ao Oahu, indrindra amin'ireo fianakaviana monina amin'ny tokantrano marobe ao anaty toe-piainana feno olona.
Tsy misy COVID-19 ny trano fikarakarana amin'izao fotoana izao.
Hawaii dia nahavita nifehy ny aretina tany am-boalohany, saingy tsy ampy izany ary ny virus dia miparitaka amin'ny foko sy ny fiarahamonina rehetra. Areti-mifindra any Hawaii ity viriosy ity.
Ny ben'ny tanànan'i Honolulu, Kirk Caldwell dia nanambara fa “Miaraha-mitandrina, aza miangona”
Hatramin'ny 7 aogositra ka hatramin'ny 5 septambra, hikatona avokoa ireo valan-javaboary 300 eto amin'ireo nosy. Hikatona avokoa ny morontsiraka rehetra manoloana ireo faritra ireo. Tsy hisy hetsika avela eny amoron-dranomasina. Avela hilomano ny Surf, anisan'izany ny trano fidiovana, saingy tsy azo ampiasaina ny torapasika. Hakatona avokoa ny tobin'ny toby, ary koa ny zaridaina botanika.
Hakatona avokoa ny toeram-piantsonanay. Misokatra ihany ny toeram-piantsonana hahazoana mankany amin'ny boaty fandatsaham-bato. Hakatona ny klioba tenisy manokana sy ny dobo filomanosana. Hakatona ny taranja golf sy ny golf tsy miankina. Mihantona hatramin'ny 5 septambra ny fanatanjahantena ekipa rehetra.
Hakatona ny bowling, arcades. Tsy misy kilasy vondrona avela ao amin'ny tobim-pahasalamana.
Nampitandrina i Caldwell fa hisy ny fampiharana. Nanazava ny Lehiben'ny HPD:
Nilaza izy fa ho fampiharana ny fanalahidy. HPD dia hametraka laharana Hot COVID hitaterana ireo mpandika lalàna amin'ny 808-723-3900 [email voaaro]
Ny polisy ao Honolulu dia hanana mpiambina 160 fanampiny 7 andro isan-kerinandro voatendry amin'ny fampiharana stratejika. Hisy citation na fisamborana ary vitsy ny fampitandremana.
"Mangataka aminao aho", hoy ny sefon'ny HPD.
Ny governora Ige dia nanambara ny fananganana quarantine 14 andro hatramin'ny 11 aogositra ho an'ny mpandeha mandeha eo amin'ny nosy Hawaii. Ny fameperana mitovy dia mijanona ho an'ny sidina hafa rehetra mankany amin'ny tanibe Etazonia sy iraisam-pirenena.